नेपाललाई फेरि हिन्दू राष्ट्र वनाउनैपर्छ - पूर्वमन्त्री भण्डारी
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व बनमन्त्री शंकर भण्डारीका अनुसार बाम एकता २ वर्ष पनि नटिक्ने
348875 पटक पढिएको
शंकर भण्डारी नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व बनमन्त्री हुनहुन्छ । दुई पटक कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य भईसकेका भण्डारी विद्यालयदेखि नै नेविसंघको राजनीतिमा आवद्ध भएपनि २०३८ सालदेखि सक्रिय विद्यार्थी राजनीतिमा होमिनु भएको थियो । उहाँले २०४२ सालको सत्याग्रह र २०४६ सालको आन्दोलनमा पनि सक्रिय भूमिका निभाउनु भएको थियो । २०४९ सालमा त्रिचन्द्र कलेज स्ववियू सभापति र २०५४ मा तरुणदल केन्द्रिय सदस्य हुनु भएको थियो ।
निडर र सहयोगी स्वभाव तथा धेरै राम्रो ब्यक्तित्व भएकोले आम जनता र कार्यकर्ता माझ देशभरी नै लोकप्रिय भएकोले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा अग्रपंथीमा आउनुपर्छ भन्ने कार्यकर्ताको भनाई रहेको छ । नेपाली काँग्रेसको बर्तमान अवस्था र भावी योजना र रणनीतिको बारेमा केन्द्रित रहेर रहेर नेपालपत्रका प्रधान-सम्पादक गोपाल भण्डारीले गरेको कुराकानी ।
तपाई निडर र सहयोगी स्वभाव तथा धेरै राम्रो ब्यक्तित्व भएकोले आम जनता र कार्यकर्ता माझ देशभरी नै लोकप्रिय हुनुहुन्छ । अव तपाई नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा अग्रपंथीमा आउनुपर्छ भन्ने कार्यकर्ताको भनाईलाई कसरी लिनु हुनुहुन्छ ?
वास्तवमा म राजनीतिमा जुन ठाउँमा छु । यो ठाउँमा आउनलाई मलाई देशभरिका अग्रज नेताहरु, देशभरका आदरणीय प्रिय युवा साथीहरु र पार्टीका विभिन्न तहका नेता साथीहरुकै माया, सहयोगले गर्दा यो ठाउँमा आएको हुँ । दुईपटक केन्द्रीय सदस्य भए । पार्टीले मलाई नौं महिना मन्त्री हुने अवसर पनि दियो । अब त्यसमा के छ भने, नेतृत्व भनेको चाहेर म होस् चाहे जोसुकै होस् विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने क्षमता, पार्टीप्रतिको आत्मादेखि लगाव, मेहनत र साथीभाईलाई गर्न सकेको सम्मान र सहयोग आदि गुणहरु नेतामा हुनुपर्छ । जबर्जस्ती रुपमा पदको लागि नेता हुनुहुदैन चाहे म होस् या अरु नै किन नहोस् त्यो राम्रो होइन भन्ने दृष्टिकोण छ । त्यसैले गर्दा अब मेरो पार्टीमा व्यक्तिगत कुनै स्वार्थ छैन । पार्टीले मलाई यो ठाउँसम्म पुर्याइएको भन्ने कुरा मैले राम्रोसँग बुझेको छु र मैले सकेको नेता र साथीहरुलाई मेरो सहयोगको भूमिका रहने छ । यो मेरो जिम्मेवारी र नैतिकताको विषय भयो । अब मूलभूत रुपमा कांग्रेसलाई शसक्त बनाउने कुरामा केही वैचारिक कुराहरु नँया ढंगले बहस पार्टीले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ । त्यसका साथ हाम्रा कमीकमजोरीहरु हामीले आत्मसाथ गर्नुपर्छ । आफ्नो कमीकमजोरीलाई केलाउनुपर्छ, खोज्नुपर्छ । कमीकमजोरीलाई स्वीकार्नुपर्छ र त्यसलाई सुधार गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ ।
तपाईले मकवानपुरमा गएर भनेको भनाई बाम एकता २ वर्ष पनि टिक्दैन धेरै चर्चित पनि भएको छ । यसलाई पुष्टि गर्ने आधारहरु के के देख्नुहुन्छ ?
यो एकता बाम गठवन्धन भएर निर्वाचनमा गएपछि भएको हो । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता निर्वाचन सकिएको करीव छ महिनापछि मात्र अनायास रुपमा भएको छ । त्यसैगरी एमाले पार्टीभित्रकै केही वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत भएका नेताले पार्टी एकता कसरी कुन ढंगले भयो थाहासम्म भएन भनेर भनिरहनु भएको छ । त्यसैले गर्दा यत्रो समयसम्म आफ्नो वुद्धि र आफ्नो अन्तर्मनवाट भएको भए एकता हुन ६ महिनासम्म लाग्दैनथ्यो । पार्टी एकता घोषणा मात्रै गरिएको छ । व्यवस्थामा पनि चुनौंती आएको छ भन्ने संचार माध्यममा हामीले पढिरहेका छौं, सुनिरहेका छौं । अर्को कुरा कुन उद्देश्य, कुन विचार र सिद्धान्तले एकता भयो भन्ने पनि छैन । कम्युनिष्टहरुको सिद्धान्त नै उग्रता, उदण्डता र अराजकता भएकाले कहिल्यै विश्वास गर्न सकिदैन । यिनीहरु भनेका खहरे खोला जस्तै हुन् बर्खामा एकदिन आएर विनाश मात्रै गर्छन्, अरुबेला कमिलो हिड्छ । काँग्रेसको केही कमीकमजोरी रहेको स्वीकार्दै यो तीन चरणको निर्वाचनबाट पाठ सिकिसकेकोले अव पार्टी एकढिक्का भएर लाग्नेछ ।
अर्को के छ भने सत्तामा वहुमत आएको छ भन्ने मनोबैज्ञानिक दम्बको भावनाले ग्रसित भएको देखिन्छ । विशेषगरी केपी ओलीका अभिव्यक्ति, कार्यशैलीवाट त्यो देखिन्छ । त्यसैले गर्दा पहिला मधेशवादी दलसँग द्वन्द्व थियो । एमालेको मधेशवादी दलसँग यत्रो विस्तृत रुपमा आग्रह, पूर्वाग्रह, दुर्वाग्रह असहमति र पानी बाराबारको अवस्था जस्तो थियो । तर रातारात केपी ओलीको मधेसवादी दलसंग कसरी यस्तो सहमति भयो भन्ने आशंका रहस्यमय छ । यो सामान्य अवस्थामा भएको कुरा होइन । त्यसकारण यो सबै कुरालाई धरातलीय रुपमा हेर्दापनि स्वार्थ र व्यक्ति केन्द्रित आशयले भएको एकताको बलियो सम्वन्ध रहेको आधार देखिदैन । सैद्धान्तिक रुपले पनि कुनै आधार देखिदैन भने व्यवहारिक रुपले पनि कुनै सिद्धान्त देखिदैन । म वाम एकतालाई वधाई र शुभकामना दिन्छु । नेपाली कांग्रेसले भन्दा राम्रो काम गरेर देखावस् ।
नेपाली काँग्रेसका लोकप्रिय केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व बनमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । तपाईले बनमन्त्री हुदाँ गरेका केहि महत्वपूर्ण कामहरु के के सम्झनुहुन्छ ?
वास्तवमा मैले भन्ने हो भने, भर्खरै मकवानपुरको एउटा कार्यक्रममा सहभागी भएर आउँदा धेरै जनतावाट के चिन्ता आयो भने, यो चुरेको समस्या धेरै छ । चुरे विनासको कारणले वातावरणीय रुपले मात्र नभएर मैले भखरै हेरेको थिए । सप्तरीमा जमिन मुनिका पानीका स्रोतहरु सुक्न थाले चुरेको कारणले गर्दा भन्ने समाचारहरु आएको छ । यी सबै समस्यालाई समाधान गर्नको लागि मैले ६ महिना भन्दा बढी लगाएर २० वर्षे चुरे योजना नेपालको इतिहासको पहिलो पटक गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद्वाट स्वीकृत गराएको हो । उक्त योजनामा करीव २ खरब, ५० अरवभन्दा वढी बजेट छ । अर्को हामीसँग भएका काठको उत्पादन, व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्न नसक्ने, चोरी हुने, सडेर जाने र हामीले महंगो काठहरु जनतालाई सहज ढंगले उपलब्ध गराउन नसक्ने तर विदेशवाट कम गुणस्तर भएका काठ र ठुलो पैसा खर्च हुने गर्छ । काठ आयत गर्ने अवस्था छ । विदेशवाट आएको काठलाई नियन्त्रण गर्न कार्यविधि तयार पारेर धेरै न्यूनीकरण भएको अवस्था छ भने, स्वदेशमै काठको उत्पादनलाई वृद्धि गर्नको लागि मेरै कार्यकालमा त्यो विभिन्न नीतिहरु निर्णय भइसकेका छन् र अहिले धमाधम काठ उत्पादन वढिरहेको छ । हुने गरेका अनियमितलाई रोक्नको लागि विधि कानुन वनेको छ र पहिले भन्दा अहिले निकै रोकथाम भएको अवस्था छ ।
तपाईलाई नेपाली काँग्रेसमा खुमबहादुर खड्काको बिरासत थाम्ने नेतृत्व लिन सक्ने योग्य नेताको रुपमा हेरिएको छ । तर तपाईको चाहना चाहिँ के छ ?
चाहना होइन, यसमा मेरो सन्देशको कुरा छ । एउटा के कुरा छ भने, धर्मको कुरा पनि छ । नेपाली काँग्रेसले नँया ढंगले वैचारिक वहस गर्नुपर्ने विषय एउटा धार्मिक विषय आयो । अहिले हामीले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा केपी ओली जति चिच्याए पनि संविधान जारी नेपाली काँग्रेसका पार्टी सभापति स्वर्गीय शुसिल कोइरालाको नेतृत्वमा भएको कुरा वहस गर्न परेन । यो तथ्यले त्यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ । त्यसपछि केपी जी नै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । केपी ओली नमुना प्रधानमन्त्री वनेर मुलुकलाई के गर्नुभयो ? निर्वाचन सम्वन्धि उँहाले कुनै भूमिका खेल्न सक्नुभयो । नेपाली काँग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले नै निर्वाचन गरायो । चुनावपछि कम्युनिष्टहरुले बहुमत ल्याएका छन् । त्यसमा के छ भने, निर्वाचनमा हामी हारेतापनि मुलुकको हरेक राजनीतिक अप्ठ्याराहरुलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि नेतृत्व पनि गर्यौ । समानुपातिक तर्फको हाम्रो जनमत राम्रो नै देखिराखेको छ । यसको धेरै कारणहरु छन् । हाम्रै धेरै कमीकमजोरीहरु छन् । हाम्रै पार्टीभित्रको अनुशासनको प्रवृति आदिले गर्दा पनि हामीले चुनाव हार्यौ । अब चुनाव जित्नको लागि नेपाली काँग्रेसले जुन किसिमको देशमा षडयन्त्र भइरहेको छ । भौगोलिक द्वन्द्व, धार्मिक द्वन्द्व, भाषिक द्वन्द्व, वर्गीय द्वन्द्व र जातजातिको द्वन्द्वको कुरा भई रहेको छ । यी सवैलाई नियन्त्रण गर्नको लागि जनमत के मा छ भन्दाखेरी वन्दै आएको विश्वासको विषय भनेको अधिकांस नेपालीहरु हिन्दु धर्मसँग आवद्ध र आस्थावान छन् । कुनैपनि धर्म मान्नेहरुले आफ्नो धर्म जुनसुकै होस् स्वीकार गर्नुपर्छ धर्ममा लाग्नेहरु आफ्नो खुसीले लाग्न पाइयो तर कसैको जवरजस्तीले अरुको लगानीमा धर्म परिवर्तन गराएर धार्मिक सहिसुण्तामा खलल पुग्ने काम गर्न पाइदैन भन्ने विषय हो । यो विषयलाई नेपाली काँग्रेसले जोडतोड रुपले अगाडी जानुपर्छ भन्ने खुमबहादुरले पनि गर्नुहुन्थ्यो । त्यो विषयमा मैले सदनमा पनि बोलेको हो र हाम्रो धेरै साथीहरुले पनि बोल्नुभएको हो ।
अव कुरा गरौ नेपाली काँग्रेसको वर्तमान अवस्थाको बारेमा । चुनावमा नेपाली काँग्रेसले सोचे अनुसारको परिणाम ल्याउन नसक्नुका कारण कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
चुनावमा नेपाली काँग्रेसले सोचे अनुसारको परिणाम ल्याउन नसक्नुका चारवटा कारणहरु मैले देखेको छु । चारैवटा कुरामा गल्ती हामीवाट भएको छ । मेरो दृष्टिकोमा पहिले कारण त गठवन्धनको प्रभावले गर्दा हो । दुईवटा दल मिलेपछि स्वाभाविक दवावले हो । त्यतिमात्र नभई दु:खका साथ म भन्छु । एउटा सत्तामा वसेर पनि चुनावको भूमिका खेल्न सकेनौं । दोस्रो कारण पार्टीभित्र अनुशासन कायम गर्न सकेनौं । घातप्रतिघात देशभरी भएको छ । तेस्रो कारण टिकट दिने उम्मेदवार चयन गर्ने सन्दर्भमा गल्ती गरेका छौं र चौंथो कारण चुनाव जित्न हामीले दुरगामी रणनीति बनाउन सकेनौ । विशेषगरी यी चारवटा कारणहरुले गर्दा हामीले चुनाव हारेका छौं । जनमत हाम्रो राम्रो छ । सबै तहमा हाम्रो मत राम्रो आएको छ ।
नेपाली काँग्रेसमा भइरहेको गुटबन्दी र असन्तुष्टिलाई हटाई पार्टीलाई एकतावद्ध गरेर लैजान पार्टी सभापतिले के गर्नुपर्छ ?
अव अहिलेको पार्टी सभापतिवाट राम्रोसँग अपेक्षाकृत भूमिका उहाँले खेल्न सक्नु भएन । उहाँवाट यो कमीकमजोरी भयो । यो सत्य कुरा हो । हामीले महसुस् गर्नुपर्छ तर के छ भने बिधानमा दुईवर्ष भन्दा वढी भईसक्यो पार्टीको सभापतिले जेजति गर्नुपर्थ्यो, त्यो गर्न सक्नु भएन तर उहाँ निर्वाचित सभापति हो । अव फेरि हाम्रो दुईवर्षपछि अधिवेशन हुन्छ । १४ औं अधिवेशन हुने अनिवार्य छ । त्यसैले गर्दा सकेसम्म उहाँलाई सक्रिय वनाएर १४ औं अधिवेशनको तयारी गर्ने हो । त्यो भन्दा अथवा फेरि गएर उपभोगको नाममा कुनै व्यक्तिलाई आग्रह-पुर्वाग्रह पनि देखिएको छ । कोहि-कोही आज एकातिर छ । कुनै एउटा कुरा मनपरेन भोलि अर्कोतिर जान्छ । यो प्रवृतिमा लागेकाहरुले आफै सोच्ने कुरा भयो । नेता साथीहरु जो-जो लाग्नु भएको छ तर अहिले के छ भने चुनौती सामना गर्नु परेको छ । अहिले पार्टीभित्र चुनौती नेताहरुले नै दिई रहेका छन् । पार्टीलाई होच्याउने काम गरिरहेका छन् । हामीले धेरै धैर्यताका साथ वढी क्रियाशील भएर आत्मविश्वासका साथ पार्टी हाक्ने भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । पार्टीको नेतृत्वको तहमा रहेका कमीकमजोरीहरुलाई स्वच्छ र मार्यादित तरिकाले पार्टीभित्र वहस गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ ।
नेपाली काँग्रेसमा युवालाई संगठित गरेर अग्र नेतृत्वपंक्तिमा आउने वातावरण अझपनि सिर्जना हुन् नसक्नुका कारणहरु के हुन् ?
युवाहरुले प्रशस्त मात्रामा अवसर पाएका छन् । यो कुरा म मान्दिन । अहिलेकै केन्द्रीय सदस्यमा १२ औं अधिवेशवाट म पनि दुईपटक केन्द्रीय सदस्य भईसकेको छु । धेरै साथीहरु निर्वाचित भएर आएका छन् । युवाले अवसरै पाएनन् भन्ने कुरालाई म स्वीकार गर्दिनँ । म यो कुरा स्वीकार छु । मलाई देशभरका साथीहरुले अपेक्षाकासाथ निर्वाचिन गराउनुभयो । अपेक्षा अनुसारले मैले केहि भूमिका खेल्न सकिन भन्ने मलाई लागिरहेको छ । मवाट गल्ती भयो भन्ने मैले महशुस गरिरहेको छु । हामी सबैले महशुस गर्नुपर्छ । म लगायत धेरै साथीहरु मन्त्री पनि भईसकेका छौं । हामीले पार्टीवाट यति पाइसक्यौं । हाम्रो कारणले पार्टी कहाँ, कसरी वलियो भएको छ र पार्टीमा कार्यकर्ताहरु हामीवाट कति उत्साहित भएका छन् ? भन्ने कुराको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । हामीले भूमिका पाएको छैन भन्ने कुरामा म सहमत छैन । पाएको भूमिकामा राम्रोसँग भमिका खेल्न सकेको छैन भन्ने कुरा मैले महशुस गरेको छु । भूमिका पाए अनुसार हामीले काम गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होइन । पार्टीको स्वार्थको लागि र त्यो भन्दा माथि राष्ट्रको स्वार्थको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने मरो दृष्टिकोण हो ।
तपाई मन्त्री हुँदा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाएर छोड्छौ भन्नु भएको पनि थियो । अहिले नेपाली काँग्रेसका केहि नेताले यो बारेमा कुरा गर्न पनि थालेका छन् । यस बारेमा तपाईको बर्तमान धारणा के हो ?
हिन्दुत्वको मूल्य र मान्यता भनेको अनादिकालदेखि नै सवैसंग मिल्ने, सवैलाई प्रेम गर्ने, सवैसंग सदभावना राख्ने र सवैलाई परोपकार गर्ने, सवैलाई एकता गर्ने मूल मन्त्र हो । हिन्दुत्व नौ प्रजातन्त्रको अभिन्न अंग हो । अहिले हामीले हिन्दुत्वलाई निषेध गरेर प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्दैनौ । आजकल प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र भन्ने गरिन्छ । नेपाली दलहरुले आवेशमा आएर कुनै निर्णय गरेतापनि हिन्दू राष्ट्र नभएसम्म लोकतन्त्र बलियो नहुने हुनाले पुनः यसमा फर्किनुको बिकल्प छैन । नेपालमा प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनु अपरिहार्य छ । हिन्दुत्व नै प्रजातन्त्रको अभिन्न अंग हो ।
शासन चल्ने भनेको जनताको मतको आधारमा हो । त्यो हो लोकतान्त्रिक शासन हो । तर अहिले मत के छ भने ८०% आस्था भएको हिन्दु धर्म हो । हिन्दु धर्म यहाँ वलियो भयो भने यहाँ हिन्दुत्वको अस्तित्व राम्रोसँग जोगाउन सक्यौं भने अरु धर्मको लागि पनि सहज हुन्छ । तर हिन्दुलाई कमजोर बनायो भने यहाँ द्वन्द्व हुन्छ । यहाँ धार्मिक द्वन्द्व नै हुन्छ । ८० प्रतिशत भएको जनमतलाई हामी खलल पार्न थालियो भने, भद्रगोल भयो भने, त्यो अति अराजकता भएन र । भोलि डरलाग्दो अवस्था आउछ । त्यस कारण हिन्दुत्वलाई जोगायौं । हिन्दुप्रतिको आस्थालाई जोगाउँ र सबैलाई आफ्नो धर्म सहजताकासाथ मान्ने वातावरण वनाउ भन्नुको खातिर हो । यो विषय नेपाली काँग्रेसको लागि प्रधान विषय हो र नेपाललाई फेरि हिन्दू राष्ट्र वनाउनैपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण हो ।
नेपाली काँग्रेसलाई जनताको मन मुटुमा बस्ने पार्टी बनाउन के गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
हामी जनताको मनमुटुमै छौं । नेपाली काँग्रेस मात्र जो नेपाली जनताको विश्वास, माया र सहयोगले निर्माण भएको पार्टी हो । यो ऐतिहासिक भूमिका खेल्ने पार्टी हो । यति हो हामीभित्र अनुशासन कमी भएको देखियो । त्यो बनाउनुपर्थ्यो । हाम्रो पार्टी भित्र रणनीतिक रुपमा कमीकमजोरीहरु देखिएको छ । त्यसलाई सुधार्नुपर्छ । राष्ट्रिय वहसका कुराहरुमा हामी अलिक चुकेको होकी जस्तो देखिएको छ । यसलाई पनि प्रधान विषय बनाएर पार्टीमा लगेर वहस गर्न सक्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्यो । त्यसपछि अब देश हाम्रै नेपालकै लगानीले, नेपालकै मिहिनेतले नेपालीकै परिश्रमले नेपाल वन्छ भन्ने कुरामा काँग्रेस स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वपंक्तिमा रहेका कमीकमजोरीलाई हटाउन तपाई जस्तो निडर युवा नेताको भूमिका के हुनेछ ?
जोसुकै किन नहोस् तर सत्य कुरालाई स्वीकार्नुपर्छ । पार्टी सभापतिवाट भएका गल्तीहरुलाई पार्टी सभापतिको समुहमा रहेका समुहले जवरजस्ती गल्ती होइन भन्नु त्यो ठुलो भुल हो । त्यस्तै वरिष्ठ नेताहरु, पार्टीका पदाधिकारीहरु हामी केन्द्रीय सदस्यहरुले पनि एकले अर्काको योग्यतालाई स्वीकार गरी सम्मान गर्नुपर्छ । अर्काको क्षमतालाई सम्मान नगरी हामी अगाडी बढ्न सकिदैन भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ र कसैको जवरजस्ती समर्थक भएर जवरजस्ती कसैलाई मान्न खोजेर हुँदैन । कमीकमजोरी छ भने कमीकमजोरी हो भन्न सक्नुपर्छ । कमीकमजोरीलाई रोक्नको लागि पनि भूमिका खेल्नुपर्छ । यसरी पार्टी बन्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो ।
अव नेपाली काँग्रेसले कस्ता रणनीति अपनाएर अघि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
अव एउटा कुरा झट्ट हेर्दा करिव-करिव ठुलो राजनीतिक व्यवस्था भएको देखिन्छ । अहिलेको नवनियुक्त पार्टीका प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको अभिव्यक्तिले मुलुकमा अझैपनि परिपक्क राजनीतिज्ञ भन्न सकिएको छैन । अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अहिले सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री भनेको सरकार बनाउनको लागि हो । अब हामीले विकासका स्रोतहरु जलस्रोत, कृषि र पर्यटन भनेका छौं । यसका आधारहरुलाई शसक्त ढंगले आर्थिक वाटोमा लानुपर्छ । आधार वनाएर त्यसलाई कार्यन्वयनमा लानुपर्छ । त्यसपछि मित्र राष्ट्रहरुसँग हाम्रो राष्ट्रियता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय अखण्डतालाई खलल नपुग्ने गरी सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्छ । त्यसपछि लाखौंको संख्यामा रहेका हाम्रा युवा साथीहरुलाई स्वदेशमै वसेर परिश्रम गर्ने वातावरण वनाउनुपर्छ । हामीसँग भएका पुँजीहरुलाई लगानी गर्ने वातावरण वनाउनुपर्यो । त्यसका लागि चाहिने विधिको शासन, कानुनी राज्य र शान्ति सुरक्षा जस्ता यी विषयमा नँया निर्माण आधार वनाएर त्यसको वाटो वनाउनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो ।
अवको ५ वर्षपछि नेपाली काँग्रेसको अवस्था कस्तो हुनेछ ?
यदि हामीले गरेका गल्तीलाई सच्चाईएन भने, स्वीकारिएन, आत्मसाथ गरिएन भने जवरजस्ती पार्टी बन्दैन । जनताले मन्दिएनन् भने पार्टीले जित्ने होइन । यी यस्ता रणनीतिका कुराहरुलाई ससक्त रुपले अगाडी बढाउन सकियो भने अत्यन्त राम्रो जनमत हाम्रो पक्षमा आउनेछ । चुनाव हामीले स्पष्ट रुपले जित्नेछौँ । अहिले वाम गठवन्धन भएपनि हामी यी कमीकमजोरीको कारणले गर्दा चुनाव हारेका छौं । त्यसैले गर्दा यी कुराहरुलाई हामीले सुधार्नुपर्छ र पाँच वर्षपछि हामी चुनाव जित्नेछौं ।
अन्त्यमा, नेपालपत्र मार्फत आम नेपाली जनतालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
हामी एउटा पवित्र नागरिक हौं । हिमाली, पहाडी र तराई मधेशी मिलेर बसेका हामी नेपाली हौं । त्यसकारण हामी नेपालीहरु अब हाम्रो देश शिरमा राखेर हाम्रो पुर्खाले गरेको मिहिनेतलाई आत्मसाथ गर्दै समृद्ध नेपाल बनाउनेतर्फ़ लाग्नुपर्छ । विदेशीको हस्तक्षप रोक्नुपर्छ । चलखेल नियन्त्रण गर्नुपर्छ । जनताद्वारा संचालित जनता निहित शासन व्यवस्थालाई टिकाउनुपर्यो र हामी सुखी र समृद्ध नेपाली वन्न सक्छौं भन्ने मेरो आग्रह छ ।